CADAABADDA UGU WEYN EE CHERRY "BESSEY": DAGAALKA KA DHANKA AH CUDURADA IYO CAYAYAANKA - CHERRY
Waxaa ka mid ah noocyo badan iyo noocyo geedo ah oo si sahlan loo heli karo goob kasta oo dacha ah, way sahlan tahay in la arko jeeriga ciidda ama, sida badanaa loo yaqaan, "Bessey" jeeriga. Si ka duwan noocyada kale duwan, dhirta waxaa lagu soo bandhigay qaab ah geedo badan oo dhir ah ilaa 1.5 mitir sare. Iyada oo ku xiran da'da, qaabka taajka waa kala duwan yahay, inkastoo lafdhabarta, ciriiriga ah ee warshad dhalinyaro ah, taas oo ah midab casaan, iyo sidoo kale maqaar, caleemaha adag, had iyo jeer kala soocaan inta ka hartay dhirta beerta. Qaybta hoose ee caleemaha waxaa lagu daboolay ubaxyo caleemo leh, oo korka ka ah saxanka xaashida leh waxay leeyihiin cagaar cagaaran. Iyadoo imaanshada dayrta, caleemaha ciidda cherry waxay soo gasho dabool qurux badan oo ah palette-casaan-cas, kaas oo siinaya geedku xitaa saameyn ku qurxinta.
Wax kasta oo ay ahayd, laakiin gobolka geedka iyo fruiting waxay ku xiran tahay inta badan iska caabinta cuduro kala duwan iyo cayayaanka, laakiin nasiib daro Bessey cherry inta badan waxay ku dhacdaa saamayntooda waxayna ku dhiman doonaan iyadoo aan gargaar aadane aheyn. Aan aragno waxa loo baahan yahay in la diyaariyo marka la kordhinayo noocyada kala duwan ee jeeriga.
Sanduuqa Cherry Sanduuqa: Waa Maxuu Saameeyaa Dhirta
Cherry "Bessey" waa kufilan tahay cudurada, hase yeeshee, waxay sidoo kale ku xiran tahay cudurrada qaar. Sidaa darteed, dhirta waxaa inta badan ay saameeyaan moniliosis, cocomycosis, anthracnose, iyo sidoo kale inta badan ku dhacdo nodules, taas oo ah sababta ay muhiim u tahay in la helo macluumaad ku filan oo ku saabsan cudurradaas cherry ciid, taas oo ka caawin doonta inay la dagaallamaan.
Monilioz - cudur fungal ah noocyo badan oo jeeriga. Cudurka khatarta ah wuxuu saameyn ku yeelan karaa oo keliya miraha iyo caleemaha geedaha, laakiin sidoo kale waxay si xun u saameeyaan xaalada qoryaha laanta. Moniliosis ayaa isla markiiba muujisa isla markiiba ka dib ubaxshaha geedka iyo waxa lagu gartaa diirinta, madadaalinta iyo qalajinta qaybaha ay dhibaatadu saameysey.
Waxay u badan tahay in cudurku kugu dhaco, waxaad arki doontaa tiro badan oo ah caleemo qalalan oo cagaar ah. Beeralayda kuwa aan hore u soo arkin dhibaatada la midka ah, waxa laga yaabaa inay u muuqato in laamaha geedku ay barafoobaan xilliga qaboobaha, laakiin iyaga oo aan ka saari karin iyo xoqidda geedaha si deg-deg ah, waxay noqonaysaa cad in xaaladda ay tahay mid aad u daran.
Ma taqaanaa? Laamaha ay arrintu saameysey waxay u egtahay muuqaalka gubashada, taas oo ah sababta magaca kale ee cudurku u muuqday - gubashada dabka.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in xitaa gobolkani, caleemaha ma dhicin, laakiin si fudud u noqo brown, sii wadaan in lagu xiro on saqafka. Waxay ku xiran tahay in xuubka fangasku uu dhex galo midhaha (iyada oo loo marayo waxyeellada farsamooyinka maqaarka), taasoo keenta mawjada cusub ee cudurka.
Giriigyada Monilioz waxay u horseedaan dufka degdega ah ee berry iyo mummified, sidaas darteed haddii beergooyska muhiim u tahay adiga, markaa waxaa habboon in la go'aamiyo sida aad uula dhaqmi doonto cudurkaan aan fiicneyn. First of dhan, dhammaan laamaha saameysey waa in laga saaro oo la gubo, iyo dhirta laftiisa waa in lagu daaweeyo leh bir ah copper-ku jira (tusaale ahaan, sulfate copper). Waxaa wanaagsan in suuqa casriga ah waxaa jira daroogo badan oo caawin kara xalinta dhibaatadan.
Hubi noocyada noocan oo kale ah jeeriga sida "Chocolate", "Dhalinyaro", "Kharitonovskaya", "Black Large", "Vladimirskaya", "Turgenevka".
Cocomycosis waa sifooyin kale oo cudur fungal ah noocyo kala duwan ee jeeriga.. Guud ahaan, fangaska xayawaanku wuxuu saameynayaa oo kaliya cidhibta caleenta dhaqanka miro-khayraadka, inkastoo ay inta badan saameyneyso miraha la sameeyay, iyaga oo ka dhigaya wax aan waxba tarayn iyo biyo-biyood marka ugu horeysa, ka dibna u keenaya inay qalalaan.
Xaaladaha ugu fiican ee faafitaanka cudurkan fangasku waa xagaaga diiran oo qoyan.inta lagu jiro taas oo dhirta uu daciif yahay, iyo joogitaanka qaboobaha qabow iyo qaboobaha ayaa dhiman kara.
Waxaad ogaan kartaa jiritaanka cudurkan si fudud adoo eegaya caleemaha cherry sand: Waxay ku daboolan yihiin dhibco yar yar, kuwaas oo ugu dambeyntii u koraan si dhibcood oo qiyaaso cajiib ah. Qeybta hoose ee saxanka caleen waxaa lagu daboolay ubaxyo casaan-cad ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhirta fungus. Si dhakhso ah, dhammaan caleemaha saameeyeen ayaa dhacaya.
Xaaladaha qaarkood, cudurku wuxuu ku faafaa midhaha Bessey jeeriga, kaas oo lagu daboolay dhibco yaryar madow oo ay bilaabaan inay wax ka qabtaan. Dabcan, miraha noocan oo kale ah lama isticmaali karo.
Marka la ogaado sida loola tacaalo cocomycosis, waa in aan xusuusanno kiisaska moniliasis, oo kor ku xusan. Taasi waa, marka laga helayo calaamadaha cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la ururiyo dhammaan qaybaha ay saameeyeen geedkii oo ay gubaan, caleemaha dhicistu waxay sidoo kale ku xiran tahay tallaabooyinka xag-jirka ah sida maadooyinka musqulaha sida jecel inay u isticmaalaan jiilaal raaxo leh. Haddii aad iska indha-tirto taladan, ka dibna guga xiga (waa in la ogaadaa in geedku daciifay uu ka badbaaday jiilaalka) muranka ayaa u gudbi doona caleemaha yar yar wax kastana waa la soo celin doonaa.
Daaweynta jiirka waa cudurkan, iyo sidoo kale cayayaanka kale ee badan, waxay ku salaysan tahay in la buufiyo geedkan leh xeryahooda oo bakteeriyadu ku jirto: xalka 1% ee isku dhafka Bordeaux, chlorine copper ama Oxyhom, taas oo aad u doorbidayso, taniyo diyaargarasyadani ma baxaan . Moobeyaal ugu horeysay waxaa lagu fuliyaa muuqaalka kore ee caleemaha ugu horreeya, iyo labaad - 15-20 maalmood ka dib ubax. Daaweynta saddexaad waxaa la doorbidaa ka dib goosashada.
Daaweynta iyo ka hortagga cudurradan, waxaad isticmaali kartaa daroogada sida birta sulfate, isku darka Bordeaux, bakteeriyada "Gamair", fungicide "Abiga-Peak".
Kordhay, ubaxyo cherry, oo ay ku jiraan jeeriga ciid, waxaa ku jira cudurkan xun sida anthracnose, taas oo inta badan saameeya miraha. Sidaa darteed, on the berry, lakabadaha yar yar ee muuqaalka hore u muuqan, hillocks foomka, ka dibna foomka patina casaan. Haddii xagaaga ay qallalan tahay, miro ayaa si dhakhso ah u bilaaba in ay qalalaan oo ay ku dhacaan qorraxda, laakiin marka ay dhacdo xilliga kuleylku waa roobab iyo qoyan, anthracnose wuxuu burburin karaa ilaa 80% dalagga.
Meelaha saddex jeer lagu buufiyo ee Bessei ku dhajiya kiimikooyinka kiimikada (tusaale ahaan, Poliram) ayaa ka caawin doona inay la qabsadaan cudurka. Daaweynta koowaad waxaa la sameeyaa ka hor inta muuqaalka ubaxyada, labaad ayaa la sameeyaa isla markiiba ka dib markii ay qufacayaan, iyo labada toddobaad ee saddexaad kadib markii labaad. Dhammaan miraha dhaawacan waa in isla markiiba la uruuriyaa oo isla markiiba burburiyaa.
Sida kiisaska hore, sababta caleemo-chlorosporia waa fungus oo ku faafa dhammaan qaybaha geedka: burooyinkeeda, ubaxa, caleemaha, caleemaha iyo miraha.. On caleemo jir ah bukaanka, dhibco brown leh xudduudda madow waxaa la aasaasay, taas oo ka dib markii qaar ka mid ah u jeestaan ​​godad yar. Tani waxay keenaysaa in la qalajiyo oo laga tago caleemaha saameeyay. Haddii aadan qaadin wax tallaabooyin ah oo aadan daaweynin cudurka, xuubka fungus wuxuu ku sii jiri doonaa jilifaha laamihiisa wuxuuna mar kale soo muuqan doonaa xilli ciyaareedka soo socda.
In dagaalka ka dhanka ah jahawareer, caleemaha saameeyeen iyo caleemaha ayaa la goostay oo la gubay, inkasta oo bannaanka qaar ku andacoodaan in burrowing sidoo kale ka caawisaa. Xaalad kasta, tani maaha mid ku filan, iyo marka cudurku soo baxayo, mid waa inuu mar labaad weydiiyo su'aasha: "Maxaa lagu rusheeyaa giriigta aan qaan-gaarin?". Caawiyaha koowaad iyo joogtada ah waa isla dareeraha Bordeaux, inkasta oo daaweynta 2-3% ee sulphate birta loo tixgeliyo inay ahaato mid waxtar leh. Daaweynta nabarrada waxaa la sameeyaa bilowga daweynta ciridka.
Guga Sand, oo ay saameeyeen klyasterosporioz, xagaaga oo lumay caleemo badan, taas oo horseedaysa daciifinta geedkan iyo jiilaalka saboolka ah.
Cayayaanka ugu weyn ee cherry "bessey"
Marka lagu daro cudurrada fangas ee xun, Berrey Bessey badanaa waxay la kulmaan cayayaanka cayayaanka, kuwa ugu caansan kuwaas oo ah kuwa soo socda.
Cayayaanka Sanduuqa Cagaaran waxaa badanaa lagu metelaa aphid cherry ah, duun yar oo leh madax madow-hurdi ah, gaashaan hurdi jaalle ah iyo seddex garaac oo madow ah ayaa lagu diyaariyey baalashyo hufan. Caadi ahaan cayayaanka ayaa ka muuqda geedka ilaa bilowgii midabada midhaha oo u duulaya iyaga oo ku saabsan illaa bil ah, oo dhigaya ukumaheeda ee berry.
Baro sidoo kale sida aad uga adkaan karto aphids iyada oo la adeegsanayo hababka dadweynaha iyo hababka la macquulsan yahay.
Sida ugu dhakhsaha badan ee miraha u bislaadaan, dirxiga lugtii cad oo ku quudinaya hilibka midhaha bislaaday u muuqda ukumaha. 8-10 maalmood ka dib, waxay ka baxaan midhaha oo dhulka ku dhacaan, halkaas oo ay ku sii qulqulaan ciidda illaa 1-3 cm oo ay bilaabaan inay ku dhalaan. Midhaha ay saameeyeen ayaa noqda madow, kallana, laakiin ma dhacaan dhulka. Caleemaha waa la qabsadaa oo joojiyaa sii kordhaya, geedo yar yar ayaa lumiya caabbinta barafka mana awoodaan in ay adkeeyaan jiilaalka.
Cayayaanka this ee cherry ciid sidoo kale waa mid khatar ah by dhalmada degdeg ah, oo sidaas daraaddeed, dagaalka ka soo horjeeda waa in isla markiiba bilaabi. Diyaargarowga ugu wanaagsan ee daaweynta geedaha waa Karbofos, Ambush, Rovikurt iyo Aktellik. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa caleemaha iyo laanta laamaha ku jira (tusaale ahaan, xal 50% karbofos).
Fiidiyowgu wuxuu sharaxayaa habka wax looga qabanayo aphids iyadoo la isticmaalayo celandine.
Cherry Weevil waa cayayaanka kale chests sandstone a.. Waxaa lagu soo bandhigaa qaab yar oo cagaaran oo cagaar ah oo leh shimbir raspberry-naxaas ah, oo ah 9 mm mudo dheer.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan cidda weevil tahay iyo sida loola macaamilo.
Xaaladaha intooda badan, cayayaanka ayaa ku dhacaya noocan oo kale ah cherry, bukaanka buka oo kuwaas oo si fudud loo qubey dhulka. Weevil Cherry weeraysaa dhirta inta lagu guda jiro ubax, quudinta on dheecaan ubax. Muddo yar ka dib, wuxuu ku qaniinaa saxarada ugxan-yar uguna dhejiyaa ukunta.
Toddobaad ka dib waxay u muuqdaan kuwa looxyo, oo bilaabaya inay ku quudiyaan waxyaabaha lafaha. Sida ugu dhakhsaha badan ee ay u bislaadaan, waxay isla markiiba ku dhacaan dhulka, pupate iyo diyaariyaan jiilaalka ee dirxiga ama wejiga qaangaarka dadka waaweyn. Waxyeello by berry weevil joojiyaan sii kordhaya oo ma u bislaadaan, oo leh duullaan weyn oo cayayaanka, dalagga oo dhan oo ah cherry ciid buuxa u baabi'in kartaa.
Dagaalka ka dhanka ah duqsigu wuxuu bilaabmaa isla markiiba ka dib ubax of geed, ku daaweynaya geedka leh Karbofos, Ambush, Rovikurt ama Aktellik. Iyadoo dib-u-helidda meelaha ay waxyeelladu gaartay waxay sameynayaan daaweyn kale.
Joogitaanka si joogto ah ee lamid ah wax ku kordhinaysaa hoos u dhaca xaddiga of weevil cherry, iyo dayrta dayrta ee ciidda caawin doonaa si loo baabi'iyo dirxiga. Waxa kale oo suurtagal ah in la xakameeyo dukaanka cayayaanka adoo rakibaya suunka xayawaanka bilowga ah ee bilawga ah. Waxaa la baari doonaa maalin kasta oo kale, burburinta jilbaha soo ururiyey halkaas.
Si aad u ciribtirto cayayaanka ka yimaada duurka qabow ee hoostiisa hoostiisa, baco balaastig ah ayaa lagu faafiyaa taas oo ay dhacaan. Ka dib markaa, dhammaan duqsiyada la soo ururiyey waa la burburiyey.
Waa muhiim! Nidaamkan waxaa si fiican loo qabtaa cimilada qaboobaha (tusaale ahaan, subaxdii hore), maaddaama ay tahay waqtigan in cayayaanka ay yihiin kuwa ugu yar.
Of hababka caanka ah ee la macaamilka weevil Cherry, isla markiiba ka dib ubax, buufinta decoction of dhaladooda yaanyo, loo diyaariyey 1.4 kg dushooda of tallons ah 10 litir oo biyo ah, waxaa inta badan loo isticmaalaa.
Isku darka soo baxa waxaa la kariyaa 30 daqiiqo, kadibna 40 gram oo saabuun lagu dhaqo ayaa lagu daraa halbeegga ka dibna xaddidaya geedaha ay saameeyeen waa la buufinayaa. Beddel ahaan, dib-u-qulqulid qadhaadh qadhaadh ah ayaa la isticmaali karaa: warshad la qalajiyey waa dhul, jeermis 24 saacadood oo biyo ah, kadibna la kariyo nus saac iyo 40 garaam oo saabuun ayaa lagu daraa. Kadib markaad waxyeelleysid, habka buufinta caadiga ah ayaa la qaadayaa.
Waa muhiim! 10 litir oo biyo ah, 350-400 g dhirta qallalan waa in la qaataa. Buufaan noocan oo kale ah ayaa burburin doona maahilada kaliya, laakiin sidoo kale aphids, iyo sidoo kale cayayaanka kale ee waxyeello kale.
Duufaan xayawaan - balanbaal ah oo jecel xayawaanka iyo tufaaxa badan, inkastoo aysan ka waabanin geedka. Cayayaankaasi waxay u muuqdaan ka dib markii ubaxu dib u dhaco, iyo celceliska kalandarka ee duulimaadyadu waxay dhacaysaa qeybta labaad ee bisha May - bilowga Juun.
Dumarku waxay bilaabaan inay jiifaan ukun 3-5 cisho ka dib marka ay ka tagaan ardayga, sii wadaan wareeggooda nololeed 4 ilaa 15 maalmood (celceliska nolol maalmeedka). Wixii qalliin ciid ah, balastar ma aha mid khatar u ah sida lafdhabarta, kaas oo, marka ay cunaan jidhka, ha u baddalaan muuqaalka midhaha oo ay aad u adagtahay in si muuqata loo arko iyaga.
Waxay u muuqdaan 5-7 maalmood kaddib marka ay ukumaha ku dhajinayaan caleemaha geedka miyir-beelka, xitaa 15-20 maalmood ka dib waxay tagaan dhulka jiilaalka. Rugta ka sameysan ee aan aboor ku duubnayn waxay ku dhaafsiisaa dillaac of jilif ee geedaha iyo xoortay, iyo sidoo kale caleemo dhacday.
Waxaa muhiim ah in la go'aamiyo wakhtiga nolosha balaarinta iyo taayirrada, kaas oo gacan ka geysan doona sidii loo xallin lahaa cayayaanka marxaladda hore ee wareegga nolosha.. La dagaallanka rinjiga caadi ahaan wuxuu bilaabmaa marka ay ku jiraan miro. Warshadda waxaa lagu buufiyaa diyaar gareyn gaar ah, oo ay ku jiraan Ambush, Anometrin, Rovikurt oo ah fiiro gaar ah oo ah 0.1%, iyo Tsimbush, Tsitkor, Shepra oo lagu qiyaasey 0.02%. Haddii lafaha iyo dirxiga ee miro midkoodna aan baabi'in, ka dib marka 10-15 maalmood ka dib miisaanka ayaa soo noqnoqda.
Sida loo badbaadiyo cherry sand ka soo cayayaanka iyo cudurada, ka hortagga
Cudurada Bessey cherry, iyo sidoo kale daaweyntooda, waxay leeyihiin sifooyin gaar ah - taasi waa xaqiiqo. Sidaa daraadeed, ma aha wax la yaab leh in tallaabooyinka ka hortagga ah ee la qaaday ay sidoo kale kala duwan yihiin kala duwanaansho. Sidaa darteed, tusaale ahaan, ka hortagga cocomycosis, moniliosis iyo klyasterosporioz ayaa ugu horreyn ku salaysan goosashada wakhtigii ku habboon ee caleemaha dhacday iyo ka saarista dhammaan qaybaha bukaanka ee burburintooda.
Si kastaba ha ahaatee, ee kiisaska moniliosis, waa lagama maarmaan in lagu qodo ciidda ee wareegyada pristvolnyh. Daawooyinka ugu wax ku oolka badan ee loo isticmaalo daaweynta dhirta naftooda iyo in lagu buufiyo ciidda, oxychloride copper, Mancozeb, Zineb, Horus, Skor, Rubigan iyo dareeraha Bordeaux waa in la kala saaraa. Intaa ka sokow, ka hor inta aan ubaxyo ubax, waxaa lagu daaweeyaa xal sulfate ah (300 garaam 10 litir oo biyo ah).
Waa muhiim! Xilliga cusub, jeeriga oo waxyeelo soo gaadhay sannadkii hore wuxuu u qalmaa dareen gaar ah. Warshadda waxaa lagu buufin karaa "Fundazole" oo ah 10 rodol oo walxo ah 10 litir oo biyo ah (daaweynta waxaa lagu fuliyaa bilowga iyo dhexda ubax). Marka maqnaanshihiisa, waxaad isticmaali kartaa daroogo kale - "Topaz".
Intaa waxaa dheer in lagu buufiyo fungicides, ka hortagga cudurada ee cherry ciid waa:
manjooyin joogto ah xilliga dhamaadka bisha Maarso (laamihii hore iyo kuwa la qalajiyey ayaa la saaraa, taas oo xajinaysa taajka);
dib u soo noolaynta geedaha gaboobay iyagoo jaraya heer sare oo ah saddex ilaa afar sano oo qoryo ah;
nadiifinta wakhtiga iyo gubista caleemo dhacday;
ka saarista laanta iyo burburinta miro qallalan, mummified iyo fungus-infected miro;
bacriminta caadiga ah iyo xoortay waraabinta.
Ma taqaanaa? In la dagaallamo cudurrada qaarkood, oo la xoqay laamihii bukaanka qaba juice sorrel saameyn wanaagsan.
Marka calaamadaha ugu horreeya ee ka mid ah cudurrada ay soo muuqdaan, ha u daahin daaweynta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la isticmaalo kaliya hal wakiil oo la xaqiijiyay, oo aan isku darin daroogooyinka. Tusaale ahaan, isku darka ah sulfate copper sulfate iyo bordeaux ayaa kordhin doona sunta sunta ah ee laba jeer.
Xeerar isku mid ah ayaa lagu dabaqayaa ka hortagga iyo xakamaynta cayayaanka carrada.